Ilizwe LaseTurkmenistan Livalela AmaNgqina KaYehova Ngenxa Yokholo Lwawo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiBhulu IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Ngo-Oktobha 22, 2014, amaNgqina kaYehova asibhozo ebekade evalelwe ngezityholo eziphekiweyo nangenxa yokungavumi ukuya emkhosini, avulelw’ iingcango zentolongo ngurhulumente waseTurkmenistan kwathiwa angahamba akasenatyala. * Ukongezelela, ngoSeptemba 2, 2014, kwalo rhulumente wakhulula nelinye iNgqina likaYehova, uBibi Rahmanova. *
Ngenxa yezi ndaba zimnandi, iQumrhu Elilawulayo lamaNgqina kaYehova labhalela uMongameli waseTurkmenistan ileta yombulelo. Le leta yathetha nangamanye amaNgqina amabini asathothoza kwesimnyama, yaza yacela ukuba nawo akhululwe. AmaNgqina kaYehova azimisele ukusebenzisana norhulumente waseTurkmenistan ukuze asombulule naziphi na iingxaki ezidl’ umzi nokuze afumane amalungelo awo.
Kusekho Ingxaki Yenkululeko Yesazela Neyonqulo
Enye yeengxaki ezikhoyo eTurkmenistan okwangoku kukuvalelwa kwabafana abangamaNgqina kaYehova kuba bengavumi ukuya emkhosini. Bevalelwa nje akuvulwa nethuba lokuba benzele ilizwe labo eminye imisebenzi engenanto yakwenza nomkhosi, ngenxa yeso sizathu baye baphoswe ngapha kwezitshixo kangangonyaka ukuya kwemibini. Xa bekhululwa baphinda bavalelwe ngenxa yesizathu esifanayo, kusithiwa ziinjubaqa baze basiwe kwiintolongo ezineemeko ezingaginyisi-mathe.
Kukho amaNgqina ayi-15 aye abhenela kwiKomiti Yamalungelo Abantu Yezizwe Ezimanyeneyo ngenxa yokuxoxiswa kuba engavumi ukuya emkhosini. * Kanti kukho namanye amaNgqina amabini ebevalelwe ngezityholo zobuxoki aye abhenela kwakule komiti.
Xa lalihlomla ngemeko yaseTurkmenistan ngoAprili 2012, iBhunga Lamazwe Ngamazwe Lamalungelo Ezopolitiko lathi: “Urhulumente umele enze amatile-tile okuba kubekho imisebenzi enokwenziwa ngabantu abangafuniyo ukuya emkhosini. Kwakhona umele aqinisekise ukuba umthetho uyibeka icace into yokuba wonk’ umntu unelungelo lokungayi emkhosini xa isazela singavumi.” Xa ithetha ngemisebenzi eyenziwa yinkonzo, eli bhunga lifuna urhulumente “aqinisekise ukuba imithetho ayibekayo iyazivumela iinkonzo ukuba zibhalise ngokusemthethweni yaye zinqule ngokukhululekileyo.” AmaNgqina aseTurkmenistan angakuvuyela ukubhalisa ngokusemthethweni ukuze anqule kungekho ziphazamiso.
Ithemba Lokuba Izinto Ziza Kuphucuka
AmaNgqina kaYehova anethemba lokuba oko kuye kwenziwa ngurhulumente waseTurkmenistan kuza kukhokelela ekuhlonelweni kwamalungelo nenkululeko yabantu, ngokukodwa inkululeko yesazela neyonqulo. Elinye igqwetha lamaNgqina lathi: “AmaNgqina kaYehova anethemba lokuba angadibanis’ iintloko norhulumente waseTurkmenistan aze afumane isisombululo esiza kuwanceda akhonze ngokukhululekileyo nangezazela ezicocekileyo.”
Ukuze ubone uludwe lwamaNgqina kaYehova avalelweyo ngenxa yokholo lwawo eTurkmenistan, cofa le linki ingezantsi.
Babanjelwe Ukholo Lwabo—ETurkmenistan
NgoNovemba 18, 2014
AmaNgqina amabini avalelwa entolongweni kuba engavumi ukuya emkhosini ngenxa yesazela.
Ngo-Oktobha 22, 2014
UMongameli waseTurkmenistan ukhulula amaNgqina kaYehova asibhozo ebevalelwe entolongweni.
Kuvalelwa amaNgqina asithoba. Asixhenxe kuwo akavumanga ukuya emkhosini yaye amabini agwetywe ngenxa yokholo lwawo.
NgoSeptemba 2, 2014
Abasemagunyeni baseTurkmenistan bakhulula uBibi Rahmanova saza isigwebo sakhe seminyaka emine sajikwa yasisigwebo esinemiqathango.
NgoAgasti 18, 2014
UBibi Rahmanova ugwetyelwa iminyaka emine entolongweni ngobungqina bobuxoki.
Kuvalelwa amaNgqina asixhenxe. Amahlanu kuwo akavumanga ukuya emkhosini yaye amabini avalelwe ngenxa yokholo lwawo.
NgoAprili 6, 2014
Kuvalelwa amaNgqina ayi-26. Ayi-13 kuwo aye ahlawuliswa imali kungekho nobungqina.
Kusavalelwe amaNgqina kaYehova asithoba. Asibhozo akazange avume ukuya emkhosini yaye elinye ligwetywe ngezityholo zobuxoki.
NgoAgasti 29, 2013
AmaNgqina kaYehova amathathu abhenela kwiKomiti Yamalungelo Abantu Yezizwe Ezimanyeneyo kuba iTurkmenistan ingawahloneli amalungelo awo okungayi emkhosini.
NgoMeyi 1, 2013
AmaNgqina kaYehova amabini abhenela kwiKomiti Yamalungelo Abantu Yezizwe Ezimanyeneyo kuba iTurkmenistan ingawahloneli amalungelo awo okungayi emkhosini.
NgoJanuwari 24, 2013
Amapolisa ayi-30 ambonzeleka aza agqogqa ikhaya likaNavruz Nasyrlayev kungekadluli xesha lide emva kokuba urhulumente waseTurkmenistan etyityimbiselwe umnwe ngempatho yakhe. La mapolisa ayibethel’ oogqirha nezicaka le ntsapho kunye neendwendwe zayo.
NgoSeptemba 7, 2012
AmaNgqina ayi-10 abhenela kwiKomiti Yamalungelo Abantu Yezizwe Ezimanyeneyo kuba iTurkmenistan ingawahloneli amalungelo awo okungayi emkhosini. Oyena wayephambili kulo mba yayinguNavruz Nasyrlayev.
NgoAgasti 21, 2008
AmaNgqina kaYehova afaka isicelo sokuba abhaliswe ngokusemthethweni eTurkmenistan.
^ isiqe. 2 Jonga inqaku elithi “ITurkmenistan Ikhulula AmaNgqina KaYehova Avalelwe Ngenxa Yokholo Lwawo”
^ isiqe. 2 Jonga inqaku elithi “Umama WaseTurkmenistan Ukhululwe Entolongweni”
^ isiqe. 6 IKomiti Yamalungelo Abantu ihlolisisa imisebenzi yeBhunga Lamazwe Ngamazwe Lamalungelo Ezopolitiko yaye iTurkmenistan le yazimanya neli bhunga ngo-1997.